Tantaran'ny Fiandohana araka ny baiboly | Hevitra MPANOHARIANA |
Tantaran'ny Fiandohana araka ny baiboly
2021-04-20 @ 01:29 in Finoana
Nisy ireo olona nandinika baiboly dia milaza ny hevitro ihany koa aho. Avy amin'ny hevitro no itazonako azy ho voarakitra ato:
Genesisy 1:1-2:3 > Ny tantaran'ny Famoronana araka ny fijery voalohany ho entina hanajana ny andro Sabata fa misy andininy tiako avoitra kely
Gen 1:26 Ary Andriamanitra nanao hoe: Andeha Isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika ; ary aoka izy hanjaka amin'ny hazandrano ao amin'ny ranomasina sy ny voro-manidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. 27 Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny; tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy; lahy sy vavy no namoronany azy. 28 Ary Andriamanitra nitso-rano azy hoe: Maroa fara sy mihabetsaha ary mamenoa ny tany, ka mampanompoa azy; ary manjaka amin'ny hazandrano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany.
Eto dia efa voasoratra sahady ny hoe hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika, ary efa nomena nitso-drano sahady Andriamanitra hoe Maroa fara sy mihabetsaha ary mamenoa ny tany, ka mampanompoa azy. Miteraka fanontaniana izany manao hoe Nahoana moa no asaina ho maro taranaka ny olombelona sady hameno ny tany? Ahoana izany ny resaka famerana ny isan-jaza? Efa feno olombelona ve ny tany sa ny fahapotehana no zary ilaina ny hamerana ny isan'ny olombelona sa toekarena sa inona ihany koa? Jereo tsara eto fa efa voasoratra sahady eto ny hoe lahy sy vavy no namoronany azy.
Genesisy 2:4-25 > Ny tantaran'ny Famoronana mifototra kokoa amin'ny famoronana ny olombelona na ny fizotran'ny famoronana ny olombelona hoe ny lahy no noforonina talohan'ny vavy na viavy izay midika hoe "avy amin'ny lehilahy". Fa tsy hitantsika amin'ny teny malagasy loatra ny dika ara-bakinteny and.4 : indreto ny andia na taranaka lanitra [maro] sy ny tany [tokana] tamin'ny andro nanaovan' YHWH Elohim ny tany sy ireo lanitra. Mandeha amin'izay ny filazana momba ny saha Edena izay nametrahana an-dralehilahy (mbola tsy nisy vehivavy), dia misy resaka renirano iray niavian'ny renirano efatra ary misy resaka volamena sy vatosoa koa. Avy ao no namoronana ny karazam-biby fa tsy misy vady sahaza ho an-dRalehilahy. Dia izay vao nakana taolan-tehezana hamoronana ny vehivavy.
Dia handingana isika mankao amin'ny Genesisy 5 avy hatrany: Ity no bokin'ny taranak'i Adama, tamin'ny andro namoronan'i Elohim lehilahy [iray] mitovy amin'ny Elohim nanao azy. 2 lahy sy vavy no namoronany azy; dia nitahy azy Izy ka nanao ny anaran-[dry zareo] hoe Adama [izay azo nantsoina ihany koa hoe olombelona raha jerena ny hebreo na hoe zanak'olombelona raha amin'ny teny malagasy [mankind] tamin' ny andro namoronany azy. Voasoratra mazava amin'ny Hebreo ny hoe Adama ary ny niantsoana azy ireo dia hoe Adama. Mety hahatonga fanontaniana ho ahy fotsiny hoe avy amin'izay ve no nahatonga ny hoe ny anaran-dehilahy no lasa entim-behivavy ihany koa? ny azo lazaina aloha dia adama no niantsoana ny olombelona voalohany. Avy eo nolazaina ny niterahany an'i Seta (Seth) izay raha adika dia hoe solo (solon'i Abela izay novonoin'i Kaina; tsy azoko tsara fa raha ny tena tokony ho dikany dia hoe nosoloina subtituted), dia mariho indray fa tsy nisy filazana ny anaran'ny vadin'i Seta eto fa toy ny hoe izy ihany no niteraka an'i Enosy, ary ny dikan'ny Enosy dia hoe lehilahy na olombelona... mahavariana an! Avy eo indray Enosy niteraka an'i Kenana izay midika hoe fananana na hoe mpanefy, somary manaitra ahy fotsiny hoe mifanakaiky amin'i Kaina ihany izany anarana izany (fa tsy mitovy). Kenana niteraka an'i Mahalalila izay midika hoe Voninahitr'Andriamanitra, Ity indray niteraka an'i Jareda izay midika hoe Dimby na taranaka, ary Jareda indray niteraka an'i Enoka izay midika hoe miaraka amin'Andriamanitra hoy ny sasany fa midika ihany koa hoe nampahalalàna, fanokanana, fanombohana izay mety handikana ny fiainana vaovao. Mitovy anarana amin'ity ihany koa anefa ny anaran'ny matoan'i Kaina ihany koa ity Enoka ity an! Metosela indray tsy hay loatra izay dikany fa misy milaza hoe olon'ny tsipika na lefona.